Ruo oge ọ na e wepụtara, e nwere ndị adịghị agwụ agwụ nkọ banyere ọhụrụ nwa ewu na ngọngọ, iOS 9. Ugbu a, na anụmanụ na unveiling a mere ụbọchị ole na ole azụ na WWDC 2015, ọrụ ike na-aka ha anya si ọhụrụ Apple àjà na ahịa. Na amaing atụmatụ dị ka mma Notes, News App, Apple Ṅaa na obere akpa, kasị mma keyboard, ọzọ nwere ọgụgụ isi Siri, ala ike mode, gbawara n'etiti ihuenyo on iPad, proactive nnyemaaka na ọtụtụ ndị ọzọ, e nwere ọ bụla ohere na 9 version ga-anapụta nkwa na ọtụtụ Ndị na-eso ụzọ na buyers nke ika.
Ihe bụ ọhụrụ ke iOS 9 beta?
Ọ bụrụ na ị na-eme na-abụ iOS onye ọrụ, melite dị ukwuu enweghị obi abụọ. Ọzọkwa, ị ga--isiokwu na-agbalị ọha na eze beta mgbe ntọhapụ ga-mere July (okokụre version update agaghị ịhụ ìhè nke ụbọchị tupu ọdịda). Ma anyị ike ịghọta eche otú ahụ ogologo oge bụ maa bụghị ihe ị ga-achọ ime, ya mere ebe-abịa ozi ọma. A Mmepụta preview dị na ugbu a na ị pụrụ n'ezie wụnye otu na ma ọ bụ na-enweghị a Mmepụta akaụntụ. Mbụ beta nke iOS 9 na-nanị pụtara n'ihi na iOS mmepe, mgbe Apple nwere na-ekwu na echichi nke software bụ naanị pụtara n'ihi na ngwaọrụ ịdenyere aha na iOS Mmepụta Mmemme na ike ga-bịanyere aka elu site n'ịṅa a ntakiri ego naanị.
Ole na ole ihe na-echeta
Dị ka onye so iOS Mmepụta usoro ị nwere ike wụnye iOS 9 Beta na gị iPhone, iPad na iPod zọsara iji ole na ole nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka, ma ọ bụghị na nwere UDID akaụntụ. Ma tupu ihe ndị ọzọ niile, ole na ole ihe ga-nọ n'uche:
Ọ dị oké mkpa na ị idebanye aha na otu atụmatụ nke $ 99 kwa afọ tupu na-ohere ka Mmepụta Preview ma ọ bụ beta nsụgharị nke ọhụrụ lunched iOS software.
-Akwadebe maka ole na ole na-amaghị chinchi ma ọ bụ agbajikwa atụmatụ dị ka beta nsụgharị bụ n'ozuzu untested.
Back elu mkpa data na na ntọala gị na iOS ngwaọrụ, site na iTunes ma ọ bụ iCloud tupu ịmafe n'elu ka iOS 9 Beta.
The Beta bụ eze dakọtara na ngwaọrụ dị ka iPhone 6s, 6s Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S, 4S, iPad Air 2, Air, Obere, Obere 3, na retina display- 3 na 4, 2, Retina iPad Obere, iPod aka (5th ọgbọ).
Wụnye na a Mmepụta Akaụntụ
• Ndabere ngwaọrụ eji ọhụrụ version nke iTunes
• Gaa Leta iOS Mmepụta Mmemme na saịtị na banye maka otu akaụntụ, dị ka kpọmkwem tupu mgbe ahụ.
• Pịa na iOS 9 Beta njikọ na-ahụ gị na ngwaọrụ ịchọrọ ị wụnye OS on.
• The beta ga ibudata. Ugbu a wepụ .ipsw faịlụ ka PC. Jikọọ na ngwaọrụ kọmputa na ẹkedori iTunes. Jidesie nnofega isi na Windows ma ọ bụ nhọrọ isi n'ihi na 'ego maka mmelite' na pịa.
• Họrọ iOS 9 faịlụ na ina malitere na-iTunes.
Wụnye na-enweghị a Mmepụta Akaụntụ
• Ndabere ngwaọrụ iCloud (opr iTunes). Ugbu a ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-aga azụ ihe ọ bụla gara aga version, e nwere mkpa iji weghachi niile onye ọdịnaya kwadoo ka iCloud. -Echeta mgbe niile, ihe ọ bụla adịghị kwadoo elu ga-efu.
Chọpụta ziri ezi beta nke iOS 9 N'ihi na ngwaọrụ gị na download. Ị pụrụ ịchọ site Evad3rs.Net. Ọ bụ mgbe niile dị mkpa ị na-ahụ na ezi version maka ngwaọrụ gị na ibudata otu, ka ọ bụla nsogbu etịbe mgbe e mesịrị. Ọ bụrụ na, ị na-amaghị banyere kpọmkwem onye ị mkpa, chọta nlereanya nọmba na azụ cover nke iPhone ma ọ bụ iPad.
Wepụ .ipsw faịlụ gị PC. Ugbu a jikọọ na ngwaọrụ kọmputa na ẹkedori iTunes, dị ka na mbụ. Jituo nnofega isi na Windows PC ma ọ bụ nhọrọ isi na Mac na dị nnọọ pịa 'ego maka mmelite'.
Ugbu a họrọ iOS 9 faịlụ na ina malitere.
Atule maka ikpeazụ usoro
Mgbe eme ihe niile ị na-azọrọ na e, nri pịa .ipsw faịlụ site amịpụtara nchekwa na pịa 'Open' na-amalite na nwụnye usoro nke iOS 9 Beta
Pịa 'Ok' iji gosi na-ekwe ka iTunes imelite ngwaọrụ a na iOS 9
The oge ngwaọrụ reboots, swipe 'Slide iji kwalite' mmịfe na imecha nwụnye usoro.
I nwere ike a welcome ákwà ngebichi mgbe a abụọ reboot.
Ugbu a họrọ 'nọgide' na-eso onscreen ntụziaka mezue melite ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị.
Ya mere, gị na ngwaọrụ ugbu a na-agba ọsọ iOS 9 Beta na i nwere ike ibugharịa na-anwale ya ngwa ọdịnala na atụmatụ.
N'ihi na a mma nghọta, na-anya ma ọ bụ ibudata online nkuzi.
Olee otú ịchọta Egbochiri Ọnụ Ọgụgụ on iPhone
> Resource> iPhone> Olee otú Download na Wụnye Apple iOS 9 beta na gị iPhone ma ọ bụ iPad